सुवास नेम्वाङ गृहमन्त्री थापासँग एका ,एक झोक्किएपछि मचियो तहल्का ! – News Nepali Dainik
सुवास नेम्वाङ गृहमन्त्री थापासँग एका ,एक झोक्किएपछि मचियो तहल्का !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण ०४, २०७७ समय: ९:१३:४०
गत साता सरकार राष्ट्रपतिविरुद्ध बोलेको अभियोगमा नेकपाकी युवा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई गिरफ्तार गर्‍यो। शंखमूलस्थित घरबाटै गिरफ्तार परेकी झाँक्री आम नागरिकको चर्को दवावका कारण ६ घण्टामै रिहा भएकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको ठाडो निर्देशनमा पक्राउ परेकी झाँक्री रिहा हुनुमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको हात रहेको बुझिएको छ। झाँक्रीलाई तत्कालै रिहाई गर्न पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङले हस्तक्षेप गरेका थिए।
झाँक्री पक्राउ परेको थाहा पाउनेबित्तिकै नेम्वाङले गृह प्रशासनसँग आपत्ति जनाएको र जतिसक्दो चाँडो रिहा गर्न भनेकोले सामान्य कागज गराएर छाडिएको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताएका छन्। प्रहरी प्रशासनमा गरेको कागजमा झाँक्रीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै आफ्नो भनाइप्रति अडान राखेकी थिइन्।
त्यसपछि झाँक्रीलाई ५ घण्टा हिरासतमा राखेर छाडिएको थियो।
स्रोतका अनुसार पक्राउ परेलगत्तै नेम्वाङले गिरफ्तारसँग झाँक्रीको गिरफ्तारबारे आपत्ति जनाएका थिए। उनले संविधानले दिएको मौलिक हकको प्रयोग गर्दा सरकार तानाशाही बन्न नहुनेमा जोड दिँदै झाँक्रीको गिरफ्तारी सरकारका लागि महंगो पर्ने भन्दै गृहमन्त्री थापासँग झोक्किएका थिए।
नेम्वाङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका दाहिना हात मानिन्छन्। तर, प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि यता नेम्वाङले आश्चर्यजनक मौनता साँधिरहेका छन्।
नेतृ झाँक्रीले केही दिनअघि गोरखामा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई व्यक्तिगत रुपमा चरित्रहत्या गर्ने ढंगले र एकल महिलाप्रति लक्षित गरेर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
उनले गोरखाको कार्यक्रममा भनेकी थिइन्, ‘राष्ट्रपतिका कुरा त के गर्नु ? म बडामहारानीलाई गोरखाबाटै सन्देश दिन चाहन्छु, निर्वाचनको तयारीका लागि सुखसुविधा ऐश–आराम छाडेर शितलनिवास छाडेर पहिला कोटेश्वरमा आउनुस्, चाबहिल कि कता बानेश्वरतिर बसाइ छ भन्ने सुन्या छु, होइन भने बालकोटै गए पनि हुन्छ। नेपालको कुन जिल्लाबाट चुनाव लड्ने हो ? त्यसको तयारी गरेर सन्देश पठाउनुस्, तपाईंसँग म पनि भारी हुन्छु।’
राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध बोलेपछि विवादमा परेकी झाँक्रीलाई पक्राऊ गर्न सत्ताधारी अखिल नेपाल महिला संघले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। उनले दिएको अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा सोधपुछ गर्न प्रहरीले कार्यालयमा बोलाइएको थियो। तर, झाँक्री हाजिर नभएपछि प्रहरी उनलाई पक्राउ गर्न घरमै पुगेको थियो।
झाँक्रीको गिरफ्तारपछि देशभरि नेता–कार्यकर्ता सडकमा आएका थिए। उनको गिरफ्तारीको विषयलाई लिएर मानवअधिकार आयोगदेखि सामाजिक अगुवाहरुले आपत्ति जनाएका थिए।
उनको गिरफ्तारी गैरन्यायिक भएको भन्दै संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङ आक्रोशित भएपछि सरकार पछाडि हट्न बाध्य भएको थियो। नेम्वाङले ओली समूहको समर्थन गरे पनि प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको मत राखिरहेका छन्।
संसद विघटनअघि सार्वजनिक कार्यक्रम र मिडियामा छाउन रमाउने नेम्वाङ त्यसयताका दिनमा खासै औपचारिक कार्यक्रममा देखिएका छैनन्। उनले संयोगवश भेटिने सञ्चारकर्मीलाई समेत अदालतमा विचाराधीन विषयमा आफू बोल्न नमिल्ने र त्यसपछि आफ्नो धारणा राख्ने बताइरहेका छन्।
नेकपा औपचारिक रुपमा फुटेपछि ओली समूहतिर लागेका नेम्वाङ प्रधानमन्त्री ओलीतिर खासै सन्तुष्ट नभएको स्रोतले बतायो। ‘‘आफूले संसद विघटन नगर्न सल्लाह दिएको तर त्यसपछि प्रधानमन्त्री आफूसँग टाढिएको’’ भन्दै उनले आफूनिकटसँग गुनासो गर्दै आएका छन्।
पूर्वएमालेमा माधव नेपालप्रति खास सकारात्मक नभएका कारण उनी ओलीनिकट रहँदै आएका थिए। तर, ओलीका पछिल्ला गतिविधिले एकपछि अर्को अप्ठ्यारोमा परेपछि नेम्वाङले ‘उचित परिस्थितिमा निणर््य लिने’ भन्दै आश्चर्यजनक मौनता साँधेका छन्। लोकपाटी न्यूजबाट
Last Updated on: February 16th, 2021 at 9:14 am